Ciyaarihii ugu dambeeyay ee bilaashka ah ee Android - Sii deynta, Faallooyinka, Xeeladaha | Androidsis
Mid ka mid ah waxyaabaha aan aadka u isticmaalno, wanaagga jiilka soo socda ee casriga ah iyo kiniiniyada, oo ay la socdaan hawlwadeenadooda badan oo leh GPUS tayo sare leh oo aan waxba ka hinaasin. qalabka kombiyuutarka ee fiidiyowga la qaadi karo maanta, waa in lagu raaxeysto waxa weyn ciyaaro kala duwan naloogu soo bandhigay keydka arjiga ee Android, ka Play Store o Google Play ka Google.
Xuquuqda halkan Androidsis Waxaad awoodi doontaa inaad ka hesho talooyinka ugu fiican ee ku saabsan sii-dayntii ugu dambeysay ee ciyaarta ee Android iyo sidoo kale kuwa ugu fiican iyo kuwa daba-dheeraada ee aan weligood dhiman.
Qeybtaan ka mid ah Ciyaaraha Android Waxaad ku raaxeysan doontaa dhammaan noocyada kala duwan ee dukaanka rasmiga ah ee Google uu na siiyo. Ciyaaraha Arcade iyo Waxqabadka, Barmaamijyada, Tacaburka, Toogashada, ciyaaraha maskaxda, wadista ciyaarta ama cayaaraha ugufiican si caruurta yaryar ee guriga joogta loogu maaweeliyo. Waxaa jira macluumaad ku saabsan ciyaaraha quraafaadka ah sida 'Minecraft PE, Crossy Road, Sky, Candy Crush, Clash of Clans, Hay Day, Subway Surfers, Plants vs Zombies 2, Agar.io iyo Angry Birds.
Shirkadaha ugu fiican ciyaarta fiidiyaha ee maanta ayaa kuugu soo ururiyay qaybtan cajiibka ah ee Ciyaaraha Android; ugu fiican ee Capcom, EA Mobile, Ubisoft, Gameloft, Cartoon Noetwork, Disney iyo Sega si loo magacaabo qaar ka mid ah magacyada waaweyn ee u heellan abuurista ciyaaraha xiisaha leh ee loogu talagalay Android.
Kulamadii ugu dambeeyay ee Android
Marka hadda waad ogtahay, naftaada ka dhig mid raaxo leh oo aad ku raaxaysato dhammaan buugga weyn ee ciyaaraha loogu talagalay Android in aan kuugu soo bandhigno gebi ahaanba bilaash ah Androidsis.
by DaniPlay samee Toddobaadyada 2 .
Waxay u badan tahay inuu yahay mid ka mid ah sagasyada ugu guusha badan taariikhda shineemooyinka, oo ay ka horreeyaan kuwa kale ee caanka ah ...
Ciyaarta in loo arko mid wanaagsan, waa inay bixisaa makaanik fudud oo farsamo leh oo aan nagu qasbeynin inaan wax aqrino ...
by Haaruun Rivas samee Toddobaadyada 3 .
Ping pong waa mid ka mid ah ciyaaraha miisaska ugu caansan adduunka, sidaas darteed sidoo kale waa ...
Haddii aad u maleyneyso in la gaadhay waqtigii ciyaarta la beddeli lahaa, laakiin aad jeceshahay cayaaraha jarista bulshada, ee ...
Mar labaad waxaan u soo qaadaneynaa boostada isku-duwidda kale ee loogu talagalay Android. Markan waa xilligii gabdhaha, tanna waxaan ku soo aruurinnay ...
Maanta, mid ka mid ah waxyaabaha ugu wax ku oolka badan iyo habab waxbarasho ee carruurta yar yar waxaa ka mid ah taleefannada gacanta ee Android
Waxaa jira qoraallo badan oo uruurin ah oo aan horey ugu sameynay Androidsis. Dhexdooda ayaan kula macaamilaan barnaamijyada noocyadooda kala duwan ...
Ku xirnaanshaha in ka badan laba bilood guriga ayaa u adeegay in waqti badan la qaato deegaanka qoyska, ...
Mid ka mid ah qaybaha ugu xiisaha badan ee la ciyaaray Play Store waa cinwaanada ...